Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » I-Ice Cube Man Vs Machine: Okokuqala Kwake Kusha Kwe-NFT Drop
Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba!
Namuhla, umlingisi, inkakha kwezokuzijabulisa kanye nomsunguli we-BIG3 u-Ice Cube umemezele ukuthi ukwehla kwakhe okukhethekile okokuqala ngqa kwe-NFT, i-Man VS Machine ivaliwe ngalo lonke uhlobo lohlelo oludayiswe ngaphansi kwamahora angama-24.
Ukwehla, ubudlelwano neciko elidumile u-Trevor Jones kanye ne-NFT Marketplace Nifty Gateway, kube ngenye yezinto eziphumelele kakhulu emlandweni wenkundla, zenza imali engaphezu kuka-$1.6 Million. Kube nentshisekelo enkulu kukho konke ukuhlelwa, okufakiwe ngakunye kufinyelela ezingeni elimangalisayo.
• I-NFT ye-Gold Edition eyi-12 ($15,000 lilinye) ithole okufakiwe okungaphezu kuka-400 ngohlelo ngalunye
• I-40 Silver Edition NFT's ($5,000 lilinye) ithole okufakiwe okungaphezu kuka-1000 ngohlelo ngalunye.
• I-NFT's 100 Bronze Edition ($2,000 ngayinye) ithole okufakiwe okungaphezu kuka-2000 ngohlelo ngalunye
• I-Open Editions, etholakala kuphela kubanikazi bomsebenzi wobuciko wangaphambili ka-Trevor, ithengise ama-edishini angaphezu kuka-12,000
Lokhu kwehla kwe-NFT kuyingxenye yomzamo omkhulu we-Ice Cube wokuqhubeka nokuba khona kuzo zonke izindaba nezimboni ezihambisana namasiko namuhla. Kusukela ekumeleleni okukhuthazayo embonini yamafilimu, ukukhulisa iligi ye-basketball ye-BIG3, nokubambambiqhaza okhuthele ku-metaverse, i-Ice Cube iyaqhubeka nokuba ngumholi kuzo zonke izimboni.
I-NFT's evela ku-Man vs Machine izoqhubeka nokuhlala endaweni ye-Nfty Gateway futhi abanikazi ngabanye bangathintwa ukuze badayiswe kabusha. Izinhlelo ezimakethe yesibili sezivele zaziswa ngokuphindwe kane noma kahlanu futhi zathengisa enye i-$1 Million.